စာရင်းသွင်း online new
သူနာပြုလက်ထောက်သင်တန်း ( BASIC )
အခြေခံပညာသူနာပြုအလုပ်အကိုင်ဆုံးမဩဝါဒပေးအာရုံစိုက်သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်ကလေးငယ်များအဘို့အမူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုတို့ပါဝင်သည်။ ဆေးရုံတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်စိတ်ဝင်စားသူတို့အဘို့။ အသက်ကြီးနှင့်လူငယ်ကလေးများအတွက်ဆေးခန်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှုစင်တာများ။ သို့မဟုတ်သူအအသိပညာအဖြစ်ကသင်ယူဖို့ချင်တယ်။ သူတို့ကိုပတ်လည်ကလူဂရုစိုက်စေရန်။
တနင်္လာနေ့ - သောကြာနေ့ 9.00-17.00
ကျူရှင် 55,000 ဘတ်
1. ဘွဲ့, ။ အထက်တန်းကျောင်းနှစ်တွင်3သို့မဟုတ်ညီမျှ, အထက်တန်းနှစ်တွင် 6, အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလက်မှတ်, ဒီပလိုမာအတွက်ဘွဲ့ရ, မာစတာ။
2. 15-45 နှစ်အနှစ်
4. ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ Non-ကူးစက်နိုင်သောအနာရောဂါများ
ကျူရှင် 39,000 ဘတ်
ဒီသင်တန်းကိုသင်အခြေခံပညာစောင့်ရှောက်မှုသင်ပေးပါတယ်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်ကလေးငယ်များအဘို့ဂရုစိုက်ဖို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလက်ထောက်ကိုလိုက်ရန်ဆန္ဒရှိသောသူတို့အဘို့အ။ ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်အချိန်ဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာရေးအလုပ်လုပ်စိတ်ဝင်စားသူတို့အားဘဲအဘယ်သူမျှမတှေ့အကွုံမြားနှငျ့အတူ။ အဆိုပါသုံးသင်တန်းများကိုလျင်မြန်စွာပြီးစီးနှင့်ချက်ချင်းသက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်ကလေးငယ်များအဘို့ဂရုစိုက်တဲ့သူအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလက်ထောက်နိုင်ပါသည်။
တနင်္လာနေ့ - တနင်္ဂနွေ 8:00 to 16:00 am
ကျူရှင် 25000 ဘတ်
1. 15-45 နှစ်အနှစ်
3. ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ Non-ကူးစက်နိုင်သောအနာရောဂါများ
ဝန်ထမ်းများသူနာပြုများအတွက်အထူးသင်တန်းများကို - တနင်္ဂနွေ။
အဆိုပါသင်တန်းများကိုသက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်ကလေးငယ်များအခြေခံသူနာပြုနှင့်မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုမသွန်သင်အဖြစ်န်ထမ်းသူနာပြုလက်ထောက်သင်တန်းကိုသာနင်္ဂနွေနေ့တနေ့ကကြာကြသည်။ အလုပ်လုပ်နှင့်ဝန်ထမ်းများသူနာပြုလက်ထောက်တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေလိုသောသူတို့အဘို့။ (NA), သို့မဟုတ်သူတို့အားပြီးသားပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်ကျန်းမာရေးနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များအရည်အချင်းများလက်မှတ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်။
တိုင်းတနင်္ဂနွေကနေ 8:00 to 17:00 am.
523 နာရီကြာအလုပ်သင်စတိုးဆိုင်နာရီ + 420 နာရီကြာအပါအဝင်အတန်း, ယူပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Course ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ စာရင်းသွင်းဖို့စာမျက်နှာများ
load လျှောက်လွှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်စာမျက်နှာကဒီမှာနေ့စဉ် update လုပ်ပါလိမ့်မည်။ သင်တန်းတစ်လျှောက်လုံးတက်ဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ်ပြီးသားကိုတက်ပိတ်ထားကြောင်းသတိပြုမိစေရန်။ တစ်ခုချင်းစီကိုသင်တန်းကိုလျှောက်ထား၏အရအေတှကျအပြည့်အဝမသောအသိပေးစာပါဝင်သည်။ မြှင့်တင်ရေးအချိန်ဇယားကိုကြေညာရန်။ သငျသညျရှေ့အချိန်ရဲ့ခဲ့သည်ပြင်ဆင်မည်ကိုကူညီရန်။ စာရွက်စာတမ်းများကိုပွငျဆငျဖို့အသိပေးအတွက် loaded စာရွက်စာတမ်းများ။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းသွန်သင်ခြင်း လျှောက်ထား၏အရည်အချင်းများ နေ့စွဲ, အချိန်, နေရာ တစ်ခုချင်းစီကိုသင်တန်း.
အာရှသက်ကြီးရွယ်အိုများအားကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဘာသာစကားများကျောင်း။ (A.E.C. School)
17 Soi Ladprao 64 လမ်း ဆက်စပ်ရာ4Wang Thong Lang
Wang Thong Lang နယ်. Bangkok 10310